I-China iFektri ngokuthe ngqo i-100ml enokubhalwa kwincwadi yetyuwa kunye nepepper Grinder abavelisi kunye nabathengisi | Nciphisa
Yeyiphi into esetyenziswayo esilahliweyo ye-pepper grinder?
Iipilisi zepelepele zahlulwe zaziindidi ezimbini: ezokugaya iipepile kunye nezombane. Iigayo zokusila zepepile kwimarike zahlulwe zangumsebenzi onokuhlengahlengiswa kunye nokungaguquguquki. Ukusuka kwindawo yokujonga izinto, zahlulwe zaziiglasi, iplastiki, intsimbi kunye neemodeli zomthi, amazwe ahlukeneyo anokukhetha okwahlukileyo kwezixhobo. Umzekelo, amazwe akumazantsi mpuma eAsia akhetha iglasi kunye nezitayile zeplastikhi, ngelixa amazwe aseYurophu nawaseMelika ekhetha izitayile zentsimbi engenasici.
I-grinder eguqulwayo yesandla iqulathe umzimba webhotile, ikepusi yebhotile kunye ne-grinder. Le grinder ilungiswe phakathi komzimba webhotile kunye nekepusi. I-grinder inemikhono kunye nesiseko esisetiweyo emkhonweni, iringi yokugaya, isiseko sokugaya, isiseko seshafti, iqhina lokulungisa kunye nesihlalo sokulungisa umkhono wokugaya. Onke amalungu abotshwe kwaye afakwa ukufakwa kunye.
Ngokuhlengahlengisa liqhina, umsantsa phakathi komsesane wokugaya kunye nomxholo wokugaya unokuhlengahlengiswa, ukuze uhlengahlengise ukucoceka kwepepile. Inokuhlengahlengiswa ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
Izinto eziluncedo zeemveliso:
1. Gcwalisa iindidi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ngamakhono ahlukeneyo kunye neemilo ezahlukeneyo. Umthamo wamanqanaba ukusuka kwi-30ml-500ml, 80-180ml zezona zidume kakhulu; iimilo eziqhelekileyo zingqukuva nezikwere.
2. Uluhlu olubanzi lokusila: iintloko ezahlukeneyo zokugaya zinokugaya amasuntswana ahlukeneyo, anje ngetyuwa yolwandle, isesame, ipepile, njl.
3. Imisebenzi epheleleyo yohlengahlengiso: Kukho izinto ezinokuhlengahlengiswa nezingaguquguqukiyo, phakathi kwazo iimodeli ezinokuhlengahlengiswa zahlulwe zalungelelanisa uhlobo lweqhina kunye nohlengahlengiso lohlobo lokutsala.
4. Iindidi ezahlukeneyo zokugaya umphakathi: Zimbini iintlobo zezinto zokugaya ii-cores: i-ceramic grinding cores kunye ne-plastic grinding cores. Uninzi lwethu lusebenzisa ii-cores zokugaya ze-ceramic, ezihlala ixesha elide kwaye zinobuhlobo kwindalo. Iiceramic zokugaya ii-cores zingakhethwa kwaye ziyilwe ngokweemfuno ezahlukeneyo.
5.Ukwazi ukuyila okunamandla: samkela i-OEM kunye ne-ODM ngokweemfuno zabathengi, ukuguqula izimvo zabathengi zibe yinyani.
Egqithileyo I-2021 yoyilo lobuhle ityuwa yombane kunye nepepper grinder esetiweyo
Okulandelayo: Umenzi wePepper Grinder yeKofu yokuGaya iCeramic yokuGaya iCore
Umnyama oMnyama oPepile kunye neTyiwa yokuGaya ityuwa
Ipepile kunye ne-Grinder yeTyuwa
Ityuwa kunye nePepper Grinder Ihowuliseyili
Incwadana yesinongo seSpice Pepper Mill eneSe eyahlukileyo ...